Steve Jobs: fifantohana, fahitana, famolavolana | Martech Zone
Alahady, Desambra 18, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tamin'ny podcast zoma dia niresaka momba ny boky tsara indrindra novakiinay tamin'ity taona ity izahay ary, hatreto, ny tiako indrindra Steve Jobs. Tsy dia namaky be loatra aho tato ho ato - Misaotra betsaka aho Jenn fa mividy ny boky ho ahy!
Tsy fankalazana ho an'ny Asa ilay boky. Raha ny marina dia heveriko fa mandanjalanja sary voalanjalanja izay ny lafy ratsy amin'ny asa dia ny olan'ny fifehezana jadona. miteny aho lozabe satria ny fiatraikany teo amin'ny fahasalamany, ny fianakaviany, ny namany, ny mpiasany ary ny orinasany. Ny ankamaroan'ny olona dia gaga amin'i Apple… toy ny iray amin'ireo orinasa sarobidy indrindra eto an-tany. Na izany aza, nisy ny fatiantoka… Nanjaka tamin'ny toeran'ny Apple teo amin'ny sehatry ny PC i Apple ary avy eo very ny dian-tongony.
Ampy izay ny lafy ratsy… Olombelona niavaka tokoa ny asa. Ny fifantohany tamin'ny laser sy ny fahitany, ampiarahina amin'ny tsirony tsy mahomby amin'ny famolavolana dia nampiavaka ny orinasany. Ny asa dia nanova ny indostrian'ny solosaina birao, ny indostrian'ny fanontana birao, ny indostrian'ny mozika, ny indostrian'ny sarimihetsika mihetsika, ny orinasan-telefaona ary ny indostrian'ny takelaka ankehitriny. Tsy famolavolana fotsiny fa nanova ny fomba fiasan'ireo orinasa ireo.
Izaho dia iray tamin'ireo mpitsikera rehefa nilaza i Apple fa manokatra fivarotana antsinjarany. Noheveriko ho voanjo izany… indrindra satria nakaton'ny Gateway ny azy ireo. Fa ny tsy azoko hoe ny fivarotana antsinjarany dia tsy momba ny fivarotana vokatra fa ny fampisehoana ireo vokatra araka ny tian'i Jobs aseho azy ireo. Raha mbola tsy nankany amin'ny fivarotana Apple ianao dia tena tokony hijery azy io. Na dia mitsidika Fividianana tsara indrindra fotsiny aza ianao dia ho hitanao ny fomba fampisehoana hafa an'i Apple.
Walter Isaacson dia mpita tantara mahatalanjona ary niraikitra tamin'ny boky aho raha vao nosokafako. Nisy ny sarin'ny Asa hitantsika rehetra, saingy ilay boky dia nisy antsipirihany be dia be kokoa tamin'ny alàlan'ny resadresaka nifanaovana tamin'ireo olona tao amin'ilay efitrano iray ihany. Tsy hoe tsy misy kilema ilay boky. Vao tsy ela akory izay i Forbes dia namoaka zavatra hafa tanteraka tantara momba ny fanentanana Think Other.
Ho ahy manokana, ny hafatra niarahako niala tamin'ny boky dia ny fahombiazana azo rehefa tsy mitsahatra mikatsaka ny fahitana ianao. Mahatsiaro ho toy ny mahomby ihany ny orinasanay manokana tahaka ny fanoloran-tenantsika hanolotra serivisy lehibe ho an'ny mpanjifanay. Tsy azoko antoka fa vonona hahafoy zavatra betsaka toa ny nataon'i Jobs hahatongavana tany aho. Amin'ny lafiny iray, mety nandresy ady maro izy, saingy tsy azoko antoka fa nandresy tamin'ny ady izy.
Te handre ny eritreritrao momba ilay boky aho!